Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Ny safidy Visa Expat vaovao dia mety hanatsara ny fizahantany GCC
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Ny fanomezana visa ho an'ny mpiasa any ivelany, izay mahafeno fepetra, mba hijanonana any an-dafin'ny androm-piasany ary ny fampidirana andiana safidy visa vaovao hafa dia ho fanalahidin'ny fizahan-tany ary hanome tosika ho an'ny toerana manintona, hetsika ary fialamboly. Io no iray amin'ireo lohahevitra resahina ao amin'ny Arabian Travel Market (ATM), 2022, izay atao ny 8-11 mey.
ARIVAL Dubai @ ATM hifantoka amin'ny safidy visa vahiny vaovao, izay mety hanome vahana ny hetsika isam-paritra, ny toerana mahasarika, ny hetsika ary ny toerana fialamboly.
Ny fitsidihan'ny fianakaviana sy ny naman'ny misotro ronono dia hanampy amin'ny fanalefahana ny tampon'isa sy ny lakandrano amin'ny vanim-potoana fitakiana be sy ambany.
Ny sehatry ny fiaramanidina Golfa dia hahazo tombony amin'ny tsena manerantany mitentina $ 254 lavitrisa.
ARIVAL Dubai @ ATM dia mampandroso ny famoronana traikefa any amin'ny toerana haleha amin'ny fanomezana hevitra sy vondrom-piarahamonina ho an'ny mpamorona sy mpivarotra fitsangatsanganana, hetsika ary fialamboly. Izy io dia mandinika ny fironana ankehitriny sy ho avy ary mifantoka amin'ny fitomboan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny varotra, ny teknolojia, ny fizarana, ny fitarihana eritreritra ary ny fifandraisana amin'ny ambaratonga mpanatanteraka.
Tombanana fa maherin'ny 35 tapitrisa amin'izao fotoana izao ny mpiasa mpila ravinahitra any amin'ireo firenena GCC ary mety hisy ampahany betsaka amin'ny vondrom-piarahamonina fotsy hoditra, izay mety te hisotro ronono ao amin'ny GCC, na dia fotoana fohy monja aza. .
“Raha mbola eo am-pelatanan’izy ireo ny fitaovana sy ny fotoana, dia ho voajanahary, tsy ho an’ireo misotro ronono ireo ihany no handeha, fa handray fianakaviana sy namana koa. Ny zotram-piaramanidina, ny hotely, ny toerana haleha ary ny toeram-pialam-boly hafa, dia samy mandray soa avy amin'ity fidiram-bola fanampiny izay mety ho very matetika, raha niverina tany amin'ny tanindrazany ireo misotro ronono," hoy izy. Danielle Curtis, Tale fampirantiana ME, Tsena fitsangatsanganana arabo.
"Ankoatra izany, tsy kisendrasendra fotsiny fa ny roa amin'ireo tsenan'ny famahanana ambony indrindra any Dubai tamin'ny taona 2019, India misy mpitsidika roa tapitrisa ary UK, misy mpitsidika 1.2 tapitrisa manana vondrom-piarahamonina ao UAE, 2.6 tapitrisa sy 120,000 tsirairay avy," hoy izy nanampy.
Noho ny fahitana izany, ny fizahantany Dubai dia miara-miasa amin'ny Tale Jeneralin'ny Residency sy ny Raharaham-bahiny (GDRFA-Dubai), dia efa nanangana hetsika antsoina hoe "Retire in Dubai", voalohany amin'ny karazany ao amin'ny faritra, rafitra azo ampiharina miaraka amin'ny kely indrindra. fepetra ara-bola, izay ahafahan'ny mponina ao Dubai izay manakaiky ny taona fisotroan-dronono, afaka mangataka visa fisotroan-dronono dimy taona azo havaozina.
"Raha mahomby io hetsika io, dia azo inoana fa hanaraka ny firenena GCC hafa amin'ny fotoana iray. Ireo mpila ravinahitra efa misotro ronono dia tsy isalasalana fa handray anjara betsaka amin'ny sehatry ny fizahan-tany, mandray fianakaviana sy namana ary manohy mankafy fomba fiaina tsara izay efa nahazatra azy ireo, ”hoy i Curtis.
Mitentina 254 lavitrisa dolara eran-tany amin'ny taona 2019, tsy ny ampahany fahatelo lehibe indrindra amin'ny fitsangatsanganana ihany ny fitsangatsanganana, hetsika, ary fizahan-tany amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany; izany no mahatonga ny olona maro handeha amin'ny toerana voalohany. Ny fanomezana fampihetseham-po toy izany dia ny hetsika sy ny mahasarika, toy ny Expo 2020, ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2022 any Qatar, Ain Dubai, ary koa ireo toerana fizahan-tany ho avy any Arabia Saodita sy ny hatsaran-tarehy voajanahary ao Oman.
Amin'izao faha-29 taonany izao ary miara-miasa amin'ny Dubai World Trade Center (DWTC) sy ny Departemantan'ny Fizahantany sy ny varotra ara-barotra (DTCM) any Dubai, ny hetsika, mampiseho ny zava-nisongadina tamin'ny 2022 dia ahitana, ankoatry ny hafa, ny fihaonam-be miompana amin'ny tsena loharano fototra. Saodiana, Rosia, Shina ary India.
Travel Forward, hetsika manerantany ho an'ny teknolojian'ny fitsangatsanganana izay manasongadina ny teknolojia farany ho an'ny fitsangatsanganana sy ny fandraisana vahiny, ny forum mpividy ATM ary ny hetsika tambajotra haingana.
Ny ATM 2022 koa dia hampiantrano fihaonambe natokana ho an'ny Global Stage, mandrakotra ny fiaramanidina, hotely, fizahan-tany ara-panatanjahantena, fizahan-tany antsinjarany ary seminera fampiasam-bola manokana momba ny fandraisana vahiny. Handray anjara amin'ny ATM indray ny Global Business Travel Association (GBTA), ny fikambanana ara-barotra fitsangatsanganana sy fivoriana voalohany eran-tany. Ny GBTA dia hanolotra votoaty farany momba ny fitsangatsanganana ara-barotra, fikarohana ary fanabeazana mba hamerenana ny fanarenana sy hanohanana ny fitomboan'ny fitsangatsanganana ara-barotra. Ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny "Arival the in-destination voice", ny ATM dia hanao fihaonambe antsasaky ny andro amin'ny 8 Mey na Andro 1 amin'ny ATM.
Ny ATM dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny Herinandron'ny Travel Arabo, fetiben'ny hetsika natokana ho an'ireo matihanina fitsangatsanganana manerana izao tontolo izao, hiara-hiasa sy hamolavola ny fanarenana ny indostrian'ny fitsangatsanganana Afovoany Atsinanana, amin'ny alalan'ny fampirantiana, fihaonambe, famelabelarana sakafo maraina, loka, fandefasana vokatra ary hetsika amin'ny tambajotra.
Taorian'ny 2021, ATM virtoaly dia hatao indray ao anatin'ny Herinandron'ny Travel Arabo mba hamenoana ny fampisehoana ATM mivantana. Miaraka amin'ny fandaharan'asa webinars midadasika sy avo lenta ary fandaharam-potoana feno amin'ny fivoriana video azon'ny mpampiranty miaraka amin'ireo mpividy lehibe manerana izao tontolo izao.
Momba ny tsena fitsangatsanganana arabo (ATM)
Arabian Travel Market (ATM), amin'izao faha-29 taonany izao, no hetsika iraisam-pirenena fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Afovoany Atsinanana ho an'ireo matihanina amin'ny fizahantany miditra sy mivoaka. Ny ATM 2021 dia nampiseho orinasa maherin'ny 1,300 avy amin'ny firenena 62 manerana ny efitrano sivy ao amin'ny Dubai World Trade Center, miaraka amin'ireo mpitsidika avy amin'ny firenena 140 mahery nandritra ny efatra andro. Arabian Travel Market dia ampahany amin'ny Herinandron'ny Travel Arabian. #IdeasArriveEto
eTurboNews dia mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery ho an'ny ATM.